China Frozen French Fries / Potato Chips Frying Production Line mpanamboatra sy mpamatsy |INCHOI
Fanondrahana Fry Fry/Potato Chips Fry
Ny poti-ovy nendasina sy ny fitaovana fanodinana fries frantsay dia manana tombony amin'ny fampiasam-bola kely indray mandeha, ny fanjifana angovo ambany, ny fiasa maro, ny habe kely, ny tombony ambony ary ny fampiasana sy fikojakojana mety.Ny fitambaran'ny fitaovana dia ahitana ny fanasana sy ny peeling, slicing (stripes), blanching, tsy fahampian-drano, menaka sy rano mifangaro endasina, deoiling, zava-manitra, fonosana ary fitaovana fanampiny.
manangana sakafo → sasana sy hosory → mifantina sy manapaka → manangana mba hohanina → mitetika (esorina) → manasa → mivaingana sy miaro ny loko → tsy fahampian-drano → endasina → déoil → zava-manitra → fampitana → fonosana.Ny fizotry ny fanitsiana ny fitaovana dia afaka manao frites frantsay nendasina haingana.
◆ Ity fitaovana ity dia vita amin'ny 304 stainless steel, vokatra avo lenta, mamonjy asa, eo amin'ny fametrahana sy fametrahana ny toerana.
automatique fries french fries / poti-ovy tsipika famokarana
Fries french frites 200kg/h ka hatramin'ny 2000kg/h, 2kg ovy mamokatra 1kg french frites frites 100kg/h ka hatramin'ny 500kg/h, 4kg ovy mamokatra 1kg chips ovy.
No Anarana fahefana lafiny
1 Conveyor 0,75kw 3000*1000mm
2 milina fanasan-damba 3,75kw 3000*1200mm
3 Fiakarana tsipika 0,75kw 2000*1000mm
4 Machine cutter 3kw 1000*800mm
5 Milina fanasana lamba 4kw 4200*1200mm
6 milina fanasan-damba namboarina namboarina
7 milina fanamainana rivotra 3kw 5000*1000mm
8 milina fanasan-damba namboarina namboarina
9 milina deoil 0,11kw 1500*1000mm
10 fampangatsiahana rivotra Conveyor 2,5kw 4500*1000mm
11 IQF Freezer milina namboarina namboarina
12 milina famonosana namboarina namboarina
french fries sy ovy chips tsipika famokarana tombony.
Ny refy 1.compact dia afaka mamonjy ny toerana misy ny orinasa sakafo ary tsy misy fiantraikany amin'ny fahaiza-manao.
2. endrika endrika tsara tarehy sy kalitao avo lenta stainless SUS 304, fanadiovana mora, fepetra HACCP.
3. Manana traikefa folo taona amin'ny famokarana french fries izahay. Ny fametrahana sy fikojakojana ny serivisy dia azo omena.ary Ny tsipika dia mety ho famolavolana araka ny fisainan'ny mpanjifa sy ny haben'ny orinasa.Afaka manome tari-dalana famokarana feno, folo taona .ny mpanjifa.
4. Ny tsipika rehetra dia afaka mampihatra ny fanaraha-maso automatique. Ny boaty elektrika fanaraha-maso afovoany dia afaka mifehy ny fotoana fandrahoan-tsakafo, ny mari-pana endasina sy ny sisa.
5. Afaka mamokatra sy manamboatra milina fanasan-damba misaraka, milina fanadiovana sy peeling ary milina hafa izahay.
ANARANA FITAOVANA MODELY lafiny(mm) fahefana ara-nofo
Hoister miaraka amin'ny tank TSJ-3400*500 5000*1200*3000 0,75kw SUS304
milina fanasan-damba QPJ-2400 2800*950*1670 4.55KW SUS304
Fiakarana tsipika TJX-2500 2500*1100*1100 0.55KW SUS304
Fanasana & conveyor TSJ-3500 0.55KW SUS304
Fanasan-damba mikoriana QXJ-4200 4200*1200*1600 1,5kw SUS304
tsipika fanamainana FGX-3000 3000*1100*1800 3KW SUS304
Fast conveyor SSJ-2000 2000×820×1370 0.75KW SUS304
Milina endasina tsy tapaka SSJ-2000 6500*2300*2200 10.5KW SUS304
milina deoil vibrating ZDS-1500 1500*1100*1100 0.37KW SUS304
Conveyor SSJ-2500 2500*1200*1800 0.55KW SUS304
milina famenoana TWJ-2500 3000*1100*1700 0.75KW SUS304
milina famonosana mandeha ho azy 420 1400*970*1600 2,2kw SUS304
Ilaina ny fanaovana blanching.Afaka manimba ny asan'ny enzyme izany, ary
manatsara ny rafi-pandaminana.aro ny lokon'ny vokatra.
Amin'ity dingana ity dia azo alaina ny ovy misy tsininy ary avereno amin'ny milina fanasan-damba.
Ny fitaovana rehetra dia Stainless vy.
milina deoil vibrating
Ny vokatra nendasina dia esorina amin'ny alalan'ny milina de-oil vibration ary aparitaka tsirairay avy amin'ny
Fries cutter sy milina fanasan-damba
Ity milina ity dia ampiasaina hanapahana ovy ho tapa-kazo.Afaka manapaka ovy, vomanga, mora sasana ary mora ampiasaina.Mitsitsy ny asa sy ny fandaniana.Afaka manasa ny siramamy eo amin'ny tampon'ny poti izy mba hitazonana ny menaka.
mivadika ho ratsy ary maharitra ela ny fampiasana azy.
Ny frites dia asitrika tanteraka ao anaty rano izay afaka miaro azy amin'ny fandatsahan'ny enzymatic-oxydative;
Ny teknôlôjia fanamainana entona dia raisina. Amin'ny fanafanana azy ireo amin'ny alàlan'ny etona tsy mitsaha-mitombo, dia afaka manala ny habetsahan'ny rano eny ambonin'ny tany sy ny hamandoana avy ao anatiny.
Ny toetran'ny fanaovana tsipika fanodinana ovy french fries:
fanaovana ovy french fries tsipika fanodinana
Conveyor hoist milina
Machine fanadiovana sy peeling
Masinina fries fries potato chips
milina fanalana rano vibration
Masinina dewatering mangatsiaka
Fandrefesana tsipika elektrika
milina fanalana menaka vibration
teo aloha: Masinina Frying lalina elektrika/gazy
Manaraka: Masinina fandotoana
Poti-boankazo sy legioma mandeha ho azy puffi...